အိန္ဒြာ: သူမ ကောင်းကင်ယံထဲက ကျွန်တော့်ဆွံ့အ ကြယ်(၃)
၀မ်းနည်းသွားတာ ချက်ချင်းတောင် ဖြေလို့ မရဘူး မရေဘူး မရေ...
စကားလုံး ဝါကျတွေ ခံစားမှုဖွင့်ဆိုချက်တွေ အကုန်လုံးကြိုက်တယ်..မ...တကယ်။
ဖတ်ပြီးတော့ ကြေကွဲခြင်းတွေနဲ့ တိတ်ဆိတ်သွားခဲ့ပါတယ်ဗျာ...။
တစ်ဘဝလုံးစာ မှိုင်းညို့ရီဝေလို့ ........
လှ ဖုန်း ကြွယ် ....................
ဝတ္ထုတပုဒ်လုံးက ဖတ်ရသူရဲ့နှလုံးသားကို သိမ်းကြုံးယူငင်ပစ်လိုက်တယ်..
ဆိုတဲ့ ဆုတောင်းလေးပဲ တိုးတိုး ရွတ်မိတော့တယ်။
ကဗျာရော ၀တ္ထုတိုလေးရော.... အရေးအဖွဲ့ရော...
ဇတ်အိမ်က တစ်ကဲ့ ပါးပါးလေး၊
ဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ သူလို ကိုယ်လို
တစ်လွှာဆီ ဖဲ့ချလိုက်ပြီးတဲ့ အချိန်...
တစ်ချို့စကားပြေဆန်နေတဲ့ ဝါကျတွေ ဖြုတ်လိုက်ရင် တစ်ကယ့် ကဗျာရှည်တစ်ပုဒ်လို
ခံစားလို့ရတဲ့ ဖန်ဆင်းမှု့ အတတ်ကို လေးစားပါတယ်...
သူများရဲ့ စာကိုမဖျက်ချင်လို့ ချရေးမပြတော့ပါ...ကျနော်လို ကို့ရို့ကားယား
ဖတ်တတ်တဲ့ သူများရှိရင်...တစ်ချို့ ဝါကျလေးတွေဖြုတ်ပြီး ကဗျာတစ်ပုဒ်လို ခံစားကြည့်ပါဗျာ...ကြယ်အတေး ကိုမမှီ ပေမဲ့
နီးပါး ခံစားလို့ရတဲ့ စကားလုံး အားပြိုင်မှု့တွေ
breathless....! your skill turns me on to the man in your novel and feel like i am the girl who was in the coffin which is nearly entombed...!!!
ပထမစတင်တည်းကတွေ့တယ်။လာကြည့်လိုက်တော့ အပိုင်းနဲ့ ဖြစ်နေတာနဲ့ မဖတ်သေးဘဲ ဆုံးအောင်စောင့်နေတာ။ အပိုင်းလိုက်ဖြတ်မတ်မိရင် ၀ထ္တုရဲ့ အရသာကို အပြည့်အ၀ မခံစားလိုက်နိုင်ဘူးလို့ ထင်ရလို့။ ဒါကျွန်တော့် ပုဂ္ဂလိက အမြင်ကိုပြောတာနော်။
အခု အားလုံးပြီးသွားမှာ အစအဆုံး စိမ်ပြေနပြေကို ထိုင်ဖတ်လိုက်တယ်။ လက်ကိုင်ပ၀ါဆိုတာ လူတိုင်းသုံးကြတာပါဘဲ။ ဒါပေမယ့် မျက်လှည့်ဆရာ လက်ထဲမှာတော့ လက်ကိုင်ပ၀ါလေးဟာ အရမ်းကို ထူးဆန်းလှပစွာ အံသြဘနန်းပြကွက်တွေကို ပြသနိုင်စွမ်းရှိနေတယ်။ အခုအကြောင်းအရာလေးဟာလဲ မြင်ဖူးတွေ့ဖူးနေတဲ့ နှလုံးအိမ်များစွာနဲ့ အသားကျဖူးနေတဲ့ ဇာတ်လမ်းလေးတစ်ပုဒ်ပေါ့.. ဒါပေမယ့် တစ်ခုထူးခြားတာက ကဗျာဆရာမလက်ထဲက ထွက်ကျလာတာလေ..မျက်လှည့်ဆရာလက်ထဲက လက်ကိုင်ပ၀ါလေးလိုဘဲပေါ့..။ အရေးအသား အဖွဲ့အနွဲ့တွေကတော့ ပြောစရာမရှိလောက်အောင်ကို နှလုံးအိမ်ကို ဆွဲခေါ်လိုက်ပုံများ။ စီးကရက်တစ်လိပ် မသောက်ရဘဲ ကုန်သွားတယ်။ သိပ်ကို အချစ်ကြီးတဲ့ ယောကျာ်းနှစ်ယောက်ရဲ့ အချစ်အားပြိုင်မှုကို လှလှပပချယ်မှုန်းထားလိုက်ပုံများ။
ဒါဟာ ပန်းချီတစ်ချပ်ဆိုရင် အသက်တွေဝင်နေလိုက်တာ..။ ဒီနေရာမှာ ကျွန်တော်ရဲ့ ကတ်သီးကတ်သတ်မူအတိုင်း လှဖုန်းကြွယ် နေရာကနေ ၀င်ခံစားကြည့်တယ်။ သူ့စိတ်ထဲမှာကော ဘာတွေရှိနေမလဲ။ ဝေဒနာခံစားနေရချိန်မှာ...ဘာတွေကို တွေးနေမလဲ။ ချစ်သူကောင်လေးကို တမ်းတနေမလား။အခင်ဆုံး သူငယ်ချင်းကိုကော သတိရနေမလား။ တမလွန်ဘ၀ကနေ ယောကျာ်းနှစ်ယောက်ရဲ့ အဖြစ်အပျက်ကို မြင်နိုင်စွမ်းရှိရင်။ သူမဘယ်လိုတွေဖြစ်နေမလဲ။ ပမာဏတူညီနေပေမဲ့ ပုံသဏ္ဍာန်ကွဲနေတဲ့ ယောကျာ်းနှစ်ယောက်ရဲ့ အချစ်ထုထည်ကို သူမမြင်တွေ့လိုက်ရရင် သူမ ဘာလုပ်မလဲ...ဘာကိုတွေးမလဲ..ဘာကို ရွေးချယ်မလဲ..စသည်ဖြင့်ပေါ့.။ ကျွန်တော်ဝင်ခံစားကြည့်တာ နည်းနည်းတော့ဂွတီးဂွကျ နိုင်နေမလားဘဲ။ ဘယ်လိုဘဲဖြစ်ဖြစ် ဒီဝထ္တုလေးကတော့ ကြယ်မှိန်မှိန်လေးနှစ်လုံးရဲ့ ထေရုပတ္တိကို အနင့်နဲ့ဆုံးဖော်ကြူးခဲ့တယ်ဆိုတာတော့ အသေအချာဘဲ။ ဆက်လက်ပြီး ၀တ္တုကောင်းတွေစောင့်မျှော်နေပါတယ် မကြီးရေ။ ကြယ်အတေးကတော့ ပြောစရာလိုမယ် မထင်တော့ပါဘူး။ အစတည်းက ကြိုက်ပြီးသားလေ။
hi I haven't read this one, I will come again to read it.. see ya!